Thailandy: Miverina indray ireo mpanohitra miakanjo mena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2011 14:01 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Español, English
Mpanohitra miakanjo mena, Sary avy amin ny pejy twitpic thethaireport
Ireo mpanohitra ny fitondrana miakanjo mena any Thailand no nanetsika ireo mpikambana ao aminy an'arivony tao afovoan'ny Bangkok hanohy ny fitakiany ho amin'ny fanovana demokratika any an-toerana. Milaza ny mpitandro ny filaminana fa nahazo olona 30 000 ny fihetsiketsehana fa ireo mpikarakara kosa milaza fa 60 000 no nidina an-dalam-be.
Ity no fihetsiketsehana goavana indrindra nataon'ny miakanjo mena taorian'ny volana maro nampiharan'ny fanjakana herisetra tamin'ireo mpanohitra. Ity koa no fihetsiketsehana voalohany lehibe indrindra taorian'ny fanesorana ny fanjakana anaty hamehana tao andrenivohitra.
Mpanohana ny praiministra nailika Thaksin Shinawatra ireto mpikambana ao amin'ny mpanohitra miakanjo mena ireto, kanefa niova izany antoko izany ka nanjary fihetsiketsehana goavana hitakiana fanovana eo amin'ny fanjakana sy ny fiaraha-monina.
Bangkok Pundit nanamarina fa iny fihetsiketsehana natao tamin'ny alahady iny no goavana indrindra hatramin'ny nandrarana fihetsiketsehana tamin'ny taon-dasa.
Ity no fihetsiketsehana lehibe indrindra hatramin'ny volana Martsa – mey nisian'ny fanoherana. Tamin'ny septambra, olona 10 000 no nandray anjara tamin'ny fanehoana hery voalohany nataon'ny mpanohitra miakanjo mena tany Bangkok. Teo ho eo amin'ny 8 000 teo ireo mpanohitra miakanjo mena niangona tany Bangkok tamin'ny oktobra, 12 000 hafa koa tany Ayauthaya tamin'ny 17 oktobra, ary nahatratra 10 000 indray izany tamin'ny 19 novambra nanamarihana ny faha enimbolan'ny hetsika nanomboka tamin'ny 19 may.
Richard Barrow manome fanamarihana momba ny fihetsiketsehana
Nanomboka teo amin'ny tsangambaton'ny demokrasia ny hetsika. Jatuporn Prompan, mpitarika ny mpanohitra miakanjo mena, voararan'ny didy navoakan'ny fitsarana izy tsy handray anjara na hiteny mandritra ny fihetsiketsehana. Kanefa nodikainy izany didy izany androany. Tsy vitan'ny hoe nipetraka teo fotsiny izy fa nikabary ihany koa. Izay no nahatonga ity hetsika ity ho hafa noho ny rehetra natrehantsika hatramin'ny nisian'ny ra mandriaka nataon'ny tafika nahafatesana olona 19. Voalohany izao no nisy olona nikabary .
Namakivaky ny lalambe rehetra tao Bangkok ny filaharana mandrapahatonga teo amin'ny tsangambato. Ankoatra izay, hitako ny mpivarotra nolalovan'ny mpilahatra fa nivoaka ny tranony ary nitehaka rehefa nandalo azy ireny ny mpanohitra miakanjo mena… ny olona aman'arivony maro tonga androany dia tonga tamin'ny alalan'ny fitaterana azy manokana daholo. Ny ankamaroany dia avy amin'ny faritra manodidina an'i Bangkok sy ny faritany manodidina azy.
Tsotra ny fangatahan'izy ireo, avoaka any am-ponja ny mpitarika ny mpanohitra miakanjo mena. Dradradradrain'izy ireo fa tsy rariny ireo mpitarika ny miakanjo mavo mipetraka any amin'ny tranom-panjakana sy nanidy ny seranam-piaramanidina mbola mandehandeha any daholo.
Fanehoan-kevitra sasany tao amin'ny twitter:
Fridaylovesong: mihetsika indray ny mpanohitra miakanjo mena… ny fitohanan'ny fifamoivoizana no vokatr'izany voalohany indrindra, avy eo manaraka azy tsy ho ela ny olana eo amin'ny fandraharahana sy ny vola. Mampivadika atidoha ahy izay tsy mahay politika ny fangatahan-dry zareo. Na izany na tsy izany, tsy inoako ny fotoana ankehitriny, “vanim-potoana” itadiavan'ny olona maro fitandroana na fiadiana hitandroana ny demokrasia – nateraka hiasa isika hahazo hanina, raha jerena ny tena marina.
leosia: fanankianana marobe momba ny miakanjo mena no misy ankehitriny, manaitra ahy anefa izany ary mampirisika ahy ny tsy fanekeny hilefitra.
MrMCos: @Saksith angamba ao ambany aloky Thaksin koa ireo miakanjo mena ireo ary heveriny fa eny an-dalana no hivoarany. Fomba fitantanana vaovao.
GiantRobot7: nampikaikaika ny tsenan'ny sandam-bola ny fihetsiketsehana nataon'ny mpanohitra miakanjo mena androany… very isa 12 tamin'ny maraina….KBANK very 3.8%
NickDay13: nahazo olona 30 000 ny fihetsiketsehana nataon'ny mpanohitra miakanjo mena, nanagana trano heva 10 nanoloana ny lapam-panjakana ny PAD . Ny antokon'iza no tena matanjaka?
choochiiz: RT @PeaceinThailand: Toro-hevitra ho an'ny hetsika ataon'ny mpanohitra miakanjo mena, azafady indrindra, aorian'ny amin'ny 10 maraina vao atomboy ny hetsikareo azafady, amin'izay izahay afaka miantsena tsara. 🙂 //++